HometareenkaMashruuca Baaskiilka iyo Wadada
25 / 05 / 2019 tareenka, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY
muhiimadda qarnigan mashruuca iyo kaabayaasha gaadiidka wadada turkiyenin shaaca ka qaaday
Mashruuca Belt iyo Road: Turhan wuxuu ka qaybqaatay Shirarka Caalamiga ah ee Gaadiidka (ITF) ee Leipzig, Jarmalka wuxuuna ka jawaabay su'aalaha ajandaha. Turhan, Turkey, duubanayaan ayaa lagu wadaa hawlaha waaxda gaadiidka waa xubin ka mid ah tan iyo markii, iyo qabsadey muhiimadda ugu weyn ee shirka, ayuu yidhi. Wuxuu xusay in mawduuca mawduuca ee goluhu uu yahay furitaanka wadooyinka gaadiidka, Turhan wuxuu sheegay in uu xiriir muhiim ah ka dhex sameeyey munaasabadda guddiga iyo in uu sheekooyin ku saabsan gaadiidka, dhijitinta iyo is-beddelka tamarta.
Turhan ayaa sii waday:
X Sannadihii ugu dambeeyay ee 15 ee dalkeena, waxaan fulinay mashaariic aad u muhiim ah oo ku saabsan gaadiidka. Waxaan u sheegnay in qof walba la raacay xiisaha. Waxaan kaqeybqaaday dhacdooyinka ugu muhiimsan ee ka hadlaya dhacdada Generation iyo Road. Waxaan soo sheegnay maalgashiga gaadiidka ee dalkeenna. Wadamada nagu wareegsan, waxaan ka mid nahay wadamada u horseedaya kaabayaasha gaadiidka ee heerarka ugu sareeya ee ka jira mashruuca Belt iyo Road. Waxaan ka mid nahay wadamada ugu horumarsan ee ka jira Black Sea Ring Road. Waxan ku nuuxnuuxsanay wakiilada wadamada ay khuseyso in dhamaystirka waddadani ay wax weyn ka tarayso wadamada oo dhan iyo dalalka saddexaad. Daraasadihii aan ka fulinnay waddankeena codsiyada gaadiidka caan waa muhiim waana muhiim. Waan la wadaagnaa waxbarashadan wadamada kale. "
"Wadahadal lala yeesho Shiinaha ayaa sii socota"
mashaariicda jiilka iyo wadada la Asia ee kordhinta kobaca ganacsiga adduunka ee Yurub, Turkey, Turhan sheegay in Muujin muhiimadda ay leedahay kaabayaasha gaadiidka, "daqiiqad ka hor dhamaystirka of China kulan G20 Antalya mashaariicda jiilka iyo wadada kaabayaasha tareenka, waxaana u saxiixay heshiis is-faham la xidhiidha horumarinta. Waxaan leenahay kun kiiloo mitir 380 gudaha xuduudaheenna. Waxaan dhameystirnay kiiloomitir 500. Shaqada kilomitir xiitaa 600 ayaa sii socota. Waxaa jira qiyaastii kun oo kiilomitir oo tareeno ah oo aan qorsheyneyno in aan dhisno gudaha dalka. Waxaa la isku dayey in la bixiyo iyo maalgashi isku dhaf ah la leh Shiinaha si loo hirgeliyo kuwan, habsocodkana sii socdo
Marxaladda kale ee muhiimka ah ee waddada Malatya South Belt Road waa la dhammeeyaa
Waddada Black Sea Ring Road
Kaabayaasha tareenka ee mashruuca Belt iyo Road
Forum for Transport Transport